Ity rafitra noforonin'ny MIT ity dia manaisotra sy mametraka singa tena misy ny sary | Famoronana an-tserasera
Misaotra an'ity AI ity fa afaka manala singa isika ary mametraka azy ireo amin'ny sary araka izay itiavany azy
fa Manjary manan-danja hatrany ny faharanitan-tsaina amin'ny vahaolana maro dia zava-misy tsotra izao. Indrindra indrindra rehefa mahita ohatra sasany momba ny fampiharana azy isika rehefa mitranga izany rehefa manampy sy manala singa iray amin'ny sary araka ny itiavany azy.
Ny tiako holazaina, misaotra an'ireo tovolahy ao amin'ny MIT, azonao atao izany esory ny singa iray amin'ny sary toy ny fametrahana azy ireo amin'ny rafitra antsoina hoe GAnpaint Studio. Ity rafitra ity dia afaka mamorona sary feno avy amin'ny fikororohana sy fanovana ireo singa rehetra hitantsika ao.
Ary ny tsara indrindra dia manao izany amin'ny fomba izay tena zava-misy ny valiny. Raha ny marina dia nametraka vahaolana an-tserasera izy ireo mba hahafahanao mizaha toetra ny fomba hanesoranao ireo singa amin'ny hafainganan'ny fampiasana borosy.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia misafidy «ahitra» ianao, mandoko ny sary, ohatra ao amin'ny katedraly ananantsika, ary hiseho eo amin'ny biriky ny ahitra ary ireo faritra nosarihinay. Ary tsy manao azy io amin'ny fomba tsy miangatra araka ny eritreretintsika azy, fa amin'ny fomba tena izy.
Marina fa mamafa ny singa indraindray izy io, rehefa nampiasaintsika ny ahitra teo amin'ny andrin-jiro efa nanintona ny ahitra tamin'ny rafitra, nanjavona ilay jiro. Azonao porofoina izany avy amin'ity rohy ity.
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ity rafitra ity dia ny fahafahany mamantatra sary diso rehefa mandika ny fifandraisana mety misy eo amin'ny zavatra samy hafa sy ny toe-javatra misy azy. Ao amin'ny horonan-tsary nozarainay dia afaka ahitanao ireo fampiasana samihafa ireo sy ny fomba fiasan'ny Artigence Intelligence nampiofanin'ny MIT hanome vokatra mahavariana tsotra izao.
Amin'izao miaraka amin'ny Adobe Photoshop afaka manala zavatra haingana isika misaotra ny iray amin'ireo fitaovany farany, fa ity rafitra MIT ity dia te handroso lavitra hanome antsika ny safidy hamorona seho tena izy toa ireo andriamanitra eto an-tany ihany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Misaotra an'ity AI ity fa afaka manala singa isika ary mametraka azy ireo amin'ny sary araka izay itiavany azy
Ahoana ny fanovan'izy ireo ny vanim-potoana amin'ireo toerana 8 samy hafa ireo
Mampianatra tsikelikely ny fomba fanaovana sary voninkazo tsara tarehy ny mpanakanto koreana